Kusukela kwesokunxele: uSolwazi Nobuhle Hlongwa; iDini kanye neNhloko yesikole sezeMfundo, uSolwazi Gregory Kamwendo; Dkt. Pamela Maseko wase Nyuvesi yase Rhodes; uSolwazi Cheryl Potgieter, uSolwazi Russell Kaschula, iDini kanye neNhloko yesikole sezobuCiko, uSolwazi Nogwaja Zulu.
ISemina yokuqala yocwaningo yokwenza lokhu okunqunyiwe kwabekwa iCharter yezoLuntu kanye nesayensi yezenhlalo yethulwe kamuva nje, e-UKZN ophikweni lase Howard College Theatre nguSolwazi wase Nyuvesi yase Rhodes uRussel Kaschula.
Lokhu kulandela ekutheni uNgqongqoshe weZemfundo emazingeni aPhakeme, uDkt Blade Nzimande ehlab’ikhwelo ngayo iCharter yezoLuntu kanye nesayensi yezenhlalo njengengxenye yokuqaqulula indlela yezeMfund’ephakeme yobandlululo lwakudala, nakholwa ukuthi ezoLuntu kanye nesayensi yezenhlalo kubamb’iqhaza elikhulu ekucaciseni inkambo, izinga eliseqophelweni eliphezu kanye nobugugu bethu.
Ingxoxo kaKaschula ibihamba phezu kommongo wokufundisa ngobuliminingi kanye nokufunda izifundo emaNyuvesi aseNingizimu Afrika, ngaleso sikhathi ubechaza ebalula umlando wokufundisa ngezilimi zeSintu noma zoMdabu emeNyuvesi aseNingizimu Afrika ukuqhathanisa nohlaka loliminingi, uguquko kanye nokuhlelwa kolimi ezweni.
Ubumbano lwenhlalonhle yabantu kuye kwamataniswe nokusetshenziswa kwezilimi zomdabu emaNyuvesi aseNingizimu Afrika kube ilowo mqondo oqaqululwayo “wobuthakathaka bokuzazi wena”, lokhu kwenza abanye abafundi bakwazi okumayelana nokusetshenziswa kolimi kanye nobumbano lwenhlalonhle yabantu.
‘Iminxa engakhuthaza ukuqiniswa kwezilimi zabomdabu eNingizimu Afrika kwiMfund’ePhakeme okungenzeka kuhlanganise phakathi izinhlelo zemfundo kulabo abangenaziqu kanye nalabo asebeneziqu, ukubasekela ngezinziza zokufundisa ngezilimi zabomdabu kuphinde futhi izilimi zabomdabu zikhomb’indlela njengezilimi zokufunda kanye nokufundisa’, kubeka oka-Kaschula. Ngokuka Solwazi Nobuhle Hlongwa, oyiDini kwezokuFunda kanye nokuFundisa ngaphakathi kwalo iKolishi, ubeke wathi, ezinye zezincomo zombiko we-Charter ileso sesithupha phecelezi se- Catalytic Projects. ‘Kunomsebenzi wemikhakha ehlukahlukene kazwelonke ukuthi izilimi zomdabu eNingizimu Afrika zingenza njani ukweseka indlela yokusungula umqondo kwezoLuntu kanye neSayensi yezeNhlalo futhi zingxilise umqondo ojulile obanzi wenhlalonhle noma ukufundisa.
‘Lokhu okokuqala-ngqa kokuningi okuzolandela ezingxoxweni ezizosingathwa ukuze zinike umdlandla kwi-Charter yezoLuntu’. iPhini likaSekela Shansela kanye neNhloko yeKolishi yezoLuntu, uSolwazi Cheryl Potgieter, umemezele ngokusemthethweni uSihlalo woCwaningo esithi phecelezi Research Chair wezilimi zabomdabu uzoxhaswa iHhovisi lezoCwaningo eNyuvesi emva kokuthi enconywe waphakanyiswa kakhulu iNational Research Foundation. Usihlalo uzoba namandla ukuqhubekisela phambili imiklomelo yokusiza ukufunda izilimi zaboMdabu.